ब्राजिलको यो नदीमा किन बढ्यो कछुवाको फौज ? वैज्ञानिकहरु हैरान - नागरिक रैबार
ब्राजिलको यो नदीमा किन बढ्यो कछुवाको फौज ? वैज्ञानिकहरु हैरान
शनिबार, पुस ४, २०७७
काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलको एक नदीमा हालैका दिनहरुमा कछुवाको संख्या नाटकीय रुपमा वृद्धि भैरहेको छ ।
ब्राजिलको प्यूर्स नदीको किनारामा हजारौँको संख्यामा साउथ अमेरिकन रिभर टर्टल्स प्रजातिका कछुवाहरु देखा परेका छन् ।
ती कछुवाका बच्चाहरु सुनामीमा नदीको भित्रबाट लहरजस्तै गरी निस्किरहेका थिए । अमेजन नदीको सहायक नदीको रुपमा रहेको प्यूर्स नदी किनाराको एक संरक्षित क्षेत्रमा ती कछुवाहरुलाई जम्मा गरिएको छ ।
ब्राजिलको वन्यजन्तु संरक्षण समाजले ती हजारौँ कछुवाको तस्वीर तथा भिडियोहरु आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलका माध्यमबाट शेयर गरेको छ ।
अहिले ती अधिकांस कछुवाहरु बच्चा नै रहेको र केही समयअघि मात्रै अण्डाबाट कोरलिएको बताइएको छ । कछुवाको उक्त प्रजाति दक्षिण अमेरिकामा स्वच्छ पानीमा पाइने सबैभन्दा ठूलो प्रजाति हो ।
यो कछुवा हरेक वर्ष सोही नदी इलाकामा प्रजननका लागि आउँदछ । उक्त प्रजातिको कछुवाका बच्चालाई अण्डाबाट निकाल्नका लागि एक महिनाको समय लाग्दछ । नदी तटीय क्षेत्रको बालुवाबाट निस्किएर कछुवाहरु नदीको पानीतर्फ अगाडि बढ्दछन् । हरेक दिन हजारौँ कछुवाका बच्चा अण्डाबाट निस्किएर यसरी जम्मा भैरहेका देखिन्छन् । यो सिलसिला कैयन् दिनसम्म चलिरहन्छ ।
स्मरण रहोस् कछुवाको यो प्रजाति संकटापन्न अवस्थामा रहेको छ । जसको संरक्षणका लागि विभिन्न अनुसन्धानहरु हुने गरेका छन् । मासु तथा अण्डाको तस्वीरका कारण यो कछुवाको प्रजाति संकटमा परेको हो ।
अमेजनको जंगलमा कछुवाको यो प्रजातिले वनस्पतीका बिउविजनहरु फैलाएर पारिस्थितिकीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । साउथ अमेरिकन रिभर टर्टल्सको वयस्कको वजन ९० किलोसम्म हुन्छ ।
कथा : रातो प्रकाश बस्ती
शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बन्दै
नेकपाको केन्द्रिय सदस्यमा बाजुराका ८ जना मनोनित
खेल मैदान बनाउँदै कुकुर र बाख्रो मेयर !
काठमाडौं । अमेरिकाको एक सहरमा अहिले एउटा कुकुर मेयरको रुपमा कार्यरत छ । मर्फी नामक क्याभेलिएर किंग चार्ल्स जातको उक्त कुकुर भन्दा अगाडि उक्त सहरमा एउटा बाख्रो मेयरको रुपमा थियो । सन् २०१८ मा लिंकन नामक बाख्रोलाई उक्त सहरले मेयरको रुपमा चयन गरेको थियो । विज्ञापन यद्यपि ती जनावर मेयरहरु कार्यकारी भने होइनन्, सम्मानार्थ […]
यो हो संसारकै विषालु भ्यागुतो, करोडौँमा हुन्छ तस्करी
पृथ्वीमा अरबौँको संख्यामा जीवजन्तुहरु छन् । यी असंख्य जीवहरुको आ-आफ्नै विशेषता र क्षमता पनि छ । कतिपय यस्ता जीवहरु छन् जो लोप हुने संघारमा छन् र कतिपय त लोप भैसके । यस्तै संकटापन्न जीवहरुमध्ये एउटा हो छिर्केमिर्के भ्यागुता । यसलाई संसारकै सबैभन्दा विषालु भ्यागुता पनि भनिन्छ । सुन्तला तथा कालो रङको झालेमाले जीउ भएको उक्त […]
टेलिभिजनमा बोल्दै गर्दा प्रस्तोताको दाँत खुस्किएपछि….
काठमाडौँ– एक युक्रेनी टेलिभिजन प्रस्तोता मारिच्का पाडाल्कोको टेलिभिजनमा बोल्दाबोल्दै दाँत झरेको छ । त्यसपछि उनले सम्हालिएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरिन् तर दाँत झरेको कुरा अरुले थाहा पाए ।उनले कसैलाई नढाँटी आफ्नो ईन्स्टाग्राममा पोष्ट गरिन् र भनिन्, ‘मैले समाचार पढेको २० वर्ष भयो तर यस्तो अचम्मको अनुभूति पहिलो पटक भयो ।’भिडियोमा उनले समाचार पढ्दापढ्दै दाँत अलि तल […]
चिकित्साको क्षेत्रमा विश्वमा निकै ठूलो प्रगति भैरहेको छ । कैयन् पटक असम्भव लाग्ने चिजहरु समेत सम्भव हुने गरेका छन् यो क्षेत्रमा । विज्ञान प्रविधि तथा चिकित्साको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान भैरहेका छन् । पछिल्लो पटक एउटा यस्तै चामत्कारिक उपलब्धि हासिल भएको छ । बेलायतमा एकजना बच्चा दुईवटी आमाको गर्भमा हुर्किएर जन्मिएको छ । बेलायतको […]
युरोपको विरामी : टर्कीबारे केही रोचक तथ्य
काठमाडौं । युरोप र एसिया महादेशको सिमानामा पर्ने मुलुक टर्कीलाई एसिया र युरोप बीचको पुल पनि भनिन्छ । टर्कीलाई अर्को अनौठो नामले पनि चिनिन्छ, त्यो हो ‘युरोपको विरामी’ । आखिर टर्कीलाई किन युरोपको बिरामी भनिन्छ त ? यसको अनौठो इतिहास छ । विज्ञापन टर्कीको इतिहास निकै पुरानो तथा गर्विलो छ । इशापूर्व युनानीहरुको बसोबास […]
संसारकै महँगो केक, मूल्य १२ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । यो संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरु छन् जो आफ्नो कामका कारण चर्चित हुन्छन् । ती मान्छेहरु सदैव केही फरक तथा अनौठो काम गर्दछन् र उनीहरुले गरेका कामको चर्चा दुनियाभर हुन्छ । युएइको दुबईमा एउटा यस्तो केक तयार गरियो, जसको मूल्य नै करीब १२ करोड रुपैयाँ पर्थ्यो । सन् २०१९ मा तयार भएको उक्त केकले […]
जंगल वारफेर तालिम गर्ने पहिलो महिला सैनिक बनिन् राधिका
पीएम कप क्रिकेटमा पुलिसको लगातार दोस्रो जित
कोरोना खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटको भवनमा आगलागी
जुलुसमा निर्धारित नारा लगाउन प्रचण्ड–माधव पक्षको निर्देशिका जारी
कालो सपना देख्नु भएको छ, केही भन्नु छैन : केपी ओली
३ दिनदेखि बेपत्ता महिला यस्तो अवस्थामा फेला परिन
ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने माधव नेपालको घोषणा
संघर्ष समितिले भन्यो : भोलिको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुन्छ
दार्चुलाका एक वडा अध्यक्षद्वारा पदबाट राजिनामा
तिपाडा बजार नजिकै पल्टियाे ट्याक्टर